नयाँ प्रजातिका लक्षण कस्ता छन् ? – Tufan Media News
नयाँ प्रजातिका लक्षण कस्ता छन् ?
८ बैशाख २०७८, बुधबार १९:०७
उच्च ज्वरो आउनु, सुख्खा खोकी लाग्नु, सास फेर्न गाह्रो हुनु तथा स्वाद र गन्ध हराउनु पुरानो प्रजातिको कोरोना संक्रमणका लक्षण थिए भने अहिले यी लक्षणमा केही भिन्नता देखिएको छ ।
भारतको मुम्बइमा भएको एक अनुसन्धानमा ८० हजार संक्रमितमध्ये ६५ हजार संक्रमित लक्षणविहीन थिए भने ८ हजार व्यक्तिमा सामान्य लक्षण देखिएको थियो ।
जोखिम के थियो भने लक्षणविहीन संक्रमितमा पनि अचानक अक्सिजनको स्तर घटेर अस्पताल जाँदा कोभिड निमोनिया भइसकेको थियो । नेपालमा पनि धेरै लक्षण नदेखिएका व्यक्तिलाई कोभिड निमोनिया भएर अस्पताल भर्ना हुनुपरेको छ, सघन उपचार आवश्यक भएको छ । यो झनै जोखिमको अवस्था हो ।
नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमणमा भोक नलाग्ने, कमजोरी महशुस हुने, आँखा राता हुने, पखाला लाग्ने, बान्ता हुने तथा जाडो हुने समेत पाइएको छ । तसर्थ कोभिडको निदानमा ज्वरोलाई मात्र हेर्नु गल्ती हुनेछ ।
प्रदुषण, रुघाखोकी र कोरोना संक्रमण
अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो असर प्रदुषणले गरेको छ । प्रदुषणले अचानक मृत्यु नहुने भएको हुँदा हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा वास्ता गरेका छैनौँ । उच्च प्रदुषण मन्द र दीर्घकालीन असर गर्ने विष नै हो ।
यो विषाक्त अवस्था नियन्त्रण गर्न राज्य तथा नागरिकका तर्फबाट जति ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । हालको अवस्थामा कोरोना माहामारीभन्दा उच्च प्रदुषणको महामारी खतरनाक छ ।
यो अवस्थामा सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाएर प्रदुषण नियन्त्रणमा परिणाम देखिने खालका काम गर्नुपर्थ्यो । जस्तै: यातायात जोरबिजोर सञ्चालन, सहरका इँटाभट्टा तथा धुँवा फ्याँक्ने उद्योग सञ्चालनमा अस्थायी रोक, धुँवा फ्याँक्ने गाडीलाई खोजीखोजी नियन्त्रण, अभियानको रूपमा आगलागी नियन्त्रण तथा भेहिकल होली डे जस्ता कामले तत्काल वातावरण सुधार गर्न सकिन्थ्यो ।
प्रदुषणका कारण रुघाखोकी, दम, घाँटी खसखस हुने, आँखा बिझाउने / राता हुने, छालामा एलर्जी आउने लक्षण लिएर अस्पताल जानेको घुइँचो राज्यले देख्नुपर्दछ । प्रदुषणले सबैभन्दा असर गर्ने फोक्सो हो भने कोभिडले पनि सबैभन्दा धेरै असर गर्ने फोक्सोमै हो । प्रदुषण र कोरोना महामारी सँगसँगै भएमा मृत्युदर बढी हुन्छ भन्ने तथ्य हामीले बुझ्नु जरुरी छ ।
त्यस्तै अहिले मौसमी रुघाखोकीको पनि समय हो । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, रुघा लाग्ने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने आदि लक्षण मौसमी रुघाखोकीमा पनि देखिन्छ । अहिले यी ३ अवस्था संगसंगै बढेका छन् ।